Kuongorora kweApple's Official Remote Loop | IPhone nhau
Kudzokorora kweApple's Official Remote Loop
Patinoenda kunotenga Apple TV 4, Apple inotipa akati wandei zvishongedzo zvinogona kutifadza: iTunes chipo kadhi, iyo iri kure SteelSeries Nimbus uye tambo yeiyo Siri Remote, Remote Loop. Chii chingataurwa nezve tambo yerudzi urwu? Huye, zvinhu zvakawanda zvinogona kutaurwa, kunyangwe zvisiri zvakanyanya panguva yacho. Ini ndinonyora ino ongororo kuitira kuti vashandisi vazive zvaunotenga kana iwe wafunga kubhadhara iyo 15 € iyo Apple inobvunza kuitira tambo yepamutemo kuti usarudze kana uchifarira kana kusarudza kumirira mabhandi echitatu-bato kuti asvike, mabhanhire ayo achazonyatsosvika pamutengo wakaderera.
1 Remote Loop yakagadzirwa neganda
Remote Loop yakagadzirwa neganda
Iyo tambo inogadzirwa ne yakanaka ganda, iyo isingape kuvimba kwakanyanya, ngatizvitarisei. Mufungo wekutanga ndewekuti ichakurumidza kutsemuka uye kupedzisira ichityora, asi zvinogona kuve zvisirizvo fungidziro yatinogona kungosimbisa nekuishandisa. Apple yanga ichida kutipa chigadzirwa ine imwe finesse uye icho chinhu icho chakawana pakutanga, asi ndinotya kwazvo kuti iro dema dema richakurumidza kupera uye mufananidzo uchakuvadzwa. Zvisinei, chakanyanya kukosha ndechekuti ubatisise, kunyanya mumitambo inotevera, senge mutambo we baseball kana tenisi.
Zviripachena kuti kana isu tikatenga tambo ndeyekuchengetedza iyo Siri Remote pakurwisa. Remote Loop inosangana neSiri Remote kuburikidza neiyo Mheni chiteshi pazasi peanodzora. Icho chaive chinhu isu taitoziva, asi izvo isu zvatisingazive ndezvekuti zvine mazino maviri pamativi yeiyo yekubatanidza iyo, kana iri mukati, inodzivirira kuti isabude zvakare. Kana isu tikabatanidza aya mazino kune tambo yakakomberedza ruoko rwedu, tinogona kuva nechokwadi chekuti hatizokanda mutongi kuzasi pasi / madziro kana isu tichifarira kutamba tenesi, semuenzaniso. Sezvauri kuona mumufananidzo unotevera, pamativi ine mabhatani maviri anoshanda kutora meno uye kubvisa Remote Loop kubhadharisa Siri Remote.
Kana iwe uri kushamisika kana ichishandira iyo iPhone, mhinduro yacho kwete. Parizvino, zvinongopindirana chete neSiri Remote, asi hazvitongwe kunze kuti zvichave zvakadaro neiyo iPhone yeramangwana.
Ini handina chokwadi, chaizvo, asi chinhu chekufunga. Kana iwe uri kutotamba Beat Beat Sports, semuenzaniso, zvingave zvakakosha. Ramba uchifunga kuti iyo Siri Remote inotengeswa pa € ​​89, Saka, pakuenzanisa, € 15 hachisi chinhu. Kune rimwe divi, kana iwe ukangwarira naye uye usiri kutamba chero mutambo unogona kukonzeresa mutongi kuti adzingwe basa, ndinofunga zvakanaka kumbomira kwechinguva. Pachave nekukasika tambo dzechitatu-bato dzemarudzi ese uye dzinogona kunge dzakatengwa nemitengo yakaderera zvakanyanya, saka tinogona kutenga tambo mbiri pamutengo mumwe chete watinogona kutenga Remote Loop. Kana iwe ukandibvunza kuti ndingoti hongu kana kwete, ini ndaizoti kwete izvozvi. Ini ndinofunga chinhu chega chakakosha nezve Remote Loop ndiwo mazino uye hazvitore zvakanyanya kunyatso kuzvibereka pane mamwe mabhandi. Iwe unogona kuchinja pfungwa dzako mune ramangwana, chero bedzi usingaone vamwe kwehafu yemutengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Kudzokorora kweApple's Official Remote Loop
Ini ndaifunga kuti kwaive kutamba mitambo neremote, seWii xD zvingave zvirinani kushandisa iyo Apple TV mune Wii maitiro kutamba mitambo paiyo hombe TV!
Mhoro Shawn_Gc. Icho ndicho chimwe chezvinangwa zvacho. Mutungamiriri ane accelorometer uye gyroscope uye anogona kushandiswa senge raki mune mimwe mitambo. Ingori nyaya yenguva.
WhatsApp Web ye iPhone, yakajeka gwara